पहिलो भेटमै विवाह भयो, तर बिहेपछि बल्ल थाहा भयो श्रीमती त पोर्नस्टार रहिछन्! - Malayakhabar
होम पेज फिचर पहिलो भेटमै विवाह भयो, तर बिहेपछि बल्ल थाहा भयो श्रीमती त पोर्नस्टार...
पहिलो भेटमै विवाह भयो, तर बिहेपछि बल्ल थाहा भयो श्रीमती त पोर्नस्टार रहिछन्!
एजेन्सी := एक व्यक्तिको एकै नजरमा एक युवतीसँग माया बस्यो । उनहिरुको सम्बन्ध मित्रता, प्रेम हुँदै विवाहमा परिणत भयो । यद्यपि ती व्यक्ति त्यतिबेला झस्किए जब उनलाई थाहा भयो कि जुन युवतीसँग उनले बिहे गरेका थिए ती युवती त चर्चित पोर्नस्टार थिइन् । यो घटना बेलायतको हो । ३४ वर्षकी एमी क्रिस्टोफर्सले २६ वर्षका जोसुआ क्रिस्टी नामका युवकसँग बिहे गरेकी थिइन् । इफोर शोमा यी दुई आउनुभन्दा पहिल्यै एमीले कम बजेटको एक्स रेटेड फिल्ममा काम गरिसकेकी थिइन् ।
अघिल्लो लेख नेपाली कांग्रेस बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका सभापतिमा चक्र अधिकारी सर्वसम्मत।